सुर्मादेवीको क्रिडास्थल रहेको बझाङ जिल्लाको ताल सुर्मा सरोवर Nepalpatra सुर्मादेवीको क्रिडास्थल रहेको बझाङ जिल्लाको ताल सुर्मा सरोवर
सुर्मादेवीको क्रिडास्थल बझाङको ताल सुर्मा सरोवर
बझाङको सबैभन्दा ठूलो ताल सुर्मा सरोवर
पृष्ठभूमि : नवर्दुगामध्ये कान्छी बहिनी सुर्मादेवीको क्रिडास्थल रहेकोले यस तालको नाम सुर्मा सरोवर रहेको हो भन्ने धार्मिक जनविश्वास छ । जयपृथ्वीबहादुर सिंहले सुनारहरू झिकाएर भुक्तोली भन्ने ठाउँमा बनाएको सुन प्रशोधन गर्ने आरन चाहिं सुर्मादेवीले भष्म पारिदिएको अर्को किम्वदन्ती पनि छ । त्यस ठाउँमा अहिलेसम्म बोटबिरुवा उम्रिन नसकेको स्थानीयहरु बताउछन् ।
सुर्मा ताल बझाङ जिल्लाको सुर्मा गाउँपालिकाको सुर्मा टोलमा रहेको छ । सुर्मा ताल जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो ताल हो । सुर्मा सरोवर १४ हजार फिटको उचाइमा अवस्थित छ । यो ताल हिमालको फेदमा अवस्थित छ । यहाँको मौसम धेरै जाडो छ ।
चाँदेशिखर हिमालको फेदीमा रहेको सरोवरको पानी तीन ठाउँबाट बाहिरिएर पाँच किलोमिटर तल सुनिगाडमा आएर मिसिन्छ । सरोवरको पूर्वपट्टिको डाँडाबाट एक किलोमिटर तल १०० भन्दा बढी मानिस खान सुत्न मिल्ने विशाल विरु ओडार छ ।
सुर्मा सरोवर ताल छेउमा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सुर्मा देवीको मन्दिर छ । सुर्मा देवीको भक्तिभावको लागि मानिस यहाँ आउँछन् । यो स्थानमा साउन एकादशी मेला लाग्छ । यस तीर्थ स्थलमा जानेले, सफा, शाहाकारी भोजन र अनिवार्य ब्रहचारी नियम पालन गर्नु पर्दछ ।
लसुन, प्याज र भात खान निषेध छ । सुर्मा मन्दिर र सुर्मा तालखाली खुटृा हिड्नु पर्ने र यात्रा गर्दा छाता बोक्नु पाउने तर रेनकोट नपाउने, कुनै पनि टर्च लाइटरदियो बाल्न नपाउने अर्थात नहुने मान्यता छ । यस पश्चात चैनपुरबाट यात्रा शुरु हुने दिन घोगाडा भन्ने ठाउँ पुग्नुपर्ने र त्यही बसेर पुजा आजा गर्नुपर्ने नियम छ ।
दोस्रो दिन नुहाई धुवाई गरेर पटयुरी, लुमण्ड, दौलीचौर हुँदै पाङ्गड जडो पुग्नु पर्छ । यहाँ सुर्मा देवी मन्दिरमा पुजा आजा गर्ने र तेस्रो दिन फेरी नुवाई धुवाई गरेर सुर्मा ताल जाने उत्तरतर्फ ठाडो उकालो बाटो र त्यहाँ पुगेर तालमा पुजा गर्ने गरिन्छ । चौथो दिन विहान फर्कने र पाङ्गडजडो पुगेर मात्र चपल जुत्ता चपल लगाउने अनि फर्कने गरिन्छ ।
यो तालमा स्नान गरे सबै पापबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने भनाइ छ । बझाङवासीहरू साउन महिनाको एकादशीदेखि त्रयोदशीसम्म त्यही ओडारमा बसेर स्नान गर्छन् । त्यहाँ जलदेवीको वासस्थान छ भन्ने भनाइ भने यसको छेउमा रहेको मन्दिरमा दर्शन गरेपछि मनोकामना पुरा हुने विश्वास गरिन्छ ।
किम्वदन्ती अनुसार, उहिले पार्थी डाँडाबाट हेर्दा यहाँ सयौं महिलाले सुर्मादेवीको धान रोपिरहेका देखिन्थे रे ! उहिले सुर्मा र दुर्गा दिदीबहिनी अहिले लेकगाउँ गाविसमा पर्ने थलीमा बस्थे रे ! लसुनको निहुँमा झगडा परेका दिदीबहिनीले अंशबण्डा गर्दा थलीका खेतहरू बग्न थालेछन् । तिनै खेतका बीचमा रहेको पाँगरको रूख तान्दा त्यसको आधा भाग चुँडिएर आएछ । त्यो रूख रोपेको ठाउँ नै अहिलेको सुर्मा मन्दिर भएको र आधा रूख थलीमै रहेको जनविश्वास छ ।
धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको र्सुमासरोवर र्हेदा मानव आँखा आकृतिको छ । ताल आसपासमा पाइने रङ्गी-बिरङ्गी जङ्गली फूलहरूले यस तालको सौन्दर्यतालाई झनै मनमोहक बनाएको पाइन्छ । सुर्मा सरोवर क्षेत्र धार्मिक-पौराणिक किम्वदन्ती र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ । पाटनका रङ्गीविरङ्गी फूल, दूध झै सेताम्य झरना, लेकाली सल्ला, गुराँस, चिमालो र चाननका लहराले शोभायमान बनाएको सुर्मा सरोवर क्षेत्र पुग्दा संसार भुलेर सधैं यहीं बसिरहुँ लाग्ने गर्छ ।
सुर्मा सरोवर धाम जुन बिकास र प्रचार-प्रसारको कमिले ओझेलमा छ ।
ठूलो धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व भएपनि यातायात सुविधा नहुँदा संसारको आँखामा नपरेको सुर्मा सरोवर तालमा पुग्ने सकेको छैन ।
यो स्थल बझाङ्ग जिल्लाको सदरमुकाम चैनपुरबाट उत्तर दिशामा पर्दछ र त्यहांबाट ३० कि.मि. टाढा छ । जिल्ला सदरमुकामबाट गाडीमा ४ घण्टामा सुर्मा गाउँ पुगिन्छ र त्यहाँबाट १ दिनको पैदल यात्रापछि सुर्मा ताल पुगिन्छ ।